Umashi Wokungabi Nobudlova uhamba ngeLatin America - The World March
Ikhaya » Izaziso » Ezokuxhumana Okusemthethweni » UMashi Wokungabi Nodlame uhamba ngeLatin America
UMashi uhamba ngeMultiethnic nePluricultural Latin America ye-Nonviolence
Akuyena umuntu ongaziwa ukuthi ubudlova kudala bufakwa emhlabeni wonke.
ELatin America abantu, abanama-nuances ahlukene, balahla amafomu anobudlova ahlela imiphakathi futhi aletha njengomphumela indlala, ukungasebenzi, izifo nokufa, bacwilisa abantu ebuhlungwini nasekuhluphekeni. Kodwa-ke, udlame seluthathe abantu bethu.
Udlame lomzimba: Ukubulawa okuhlelekile, ukunyamalala kwabantu, ukucindezelwa kombhikisho womphakathi, ukubulawa kwabantu besifazane, ukushushumbiswa kwabantu, phakathi kokunye ukubonakaliswa.
Ukwephulwa Kwamalungelo Abantu: Ukuntuleka komsebenzi, ukunakekelwa kwezempilo, ukuntuleka kwezindlu, ukuntuleka kwamanzi, ukufuduka ngenkani, ukubandlululwa, njll.
Ukubhujiswa kwe-ecosystem, indawo yokuhlala yazo zonke izinhlobo zezinto eziphilayo: iMega-mining, i-agro-toxic fumigations, ukugawulwa kwamahlathi, imililo, izikhukhula, njll.
Ukukhulunywa okukhethekile kufana nabantu bomdabu, abathi, lapho bephucwe umhlaba wabo, babona amalungelo abo ephulwa nsuku zonke, befuna ukuhlala ekubandlululweni.
Singakwazi yini ukuguqula ukuqondiswa kwemicimbi emenyezelayo izinhlekelele zabantu zobukhulu obungakaze baziwe ngaphambili?
Sonke sinesibopho esithile ngokwenzekayo, kufanele sithathe isinqumo, sihlanganise izwi lethu nemizwa yethu, sicabange, sizizwe futhi senze ngendlela efanayo yokuguqula. Masingalindeli ukuthi abanye benze njalo.
Ukuhlangana kwezigidi zabantu bezilimi ezahlukahlukene, izinhlanga, izinkolelo namasiko kuyadingeka ukushisa unembeza womuntu ngokukhanya kweNonviolence.
I-World without Wars and Violence Association, into ye-Humanist Movement, ikhuthaze futhi yahlela ngokubambisana namanye amaqembu, amamashi abahamba izindawo ngenhloso yokuphakamisa ukungabi nodlame okwenza kubonakale izenzo ezinhle ezithuthukiswa ngabantu abaningi kuleyo ndlela.
Izinyathelo ezibalulekile maqondana nalokhu kube yilezi:
2009-2010 Mashi Wokuqala Womhlaba Wokuthula Nokungabi Nodlame
2017- Kuqala kweMelika Ephakathi
2018- Mashi wokuqala waseNingizimu Melika
2019- 2020. Okwesibili Umhlaba Mashi
2021- Namuhla simemezela ngentokozo enkulu imashi entsha, kulokhu ebonakalayo futhi ubuso nobuso, esifundeni sethu sonke esisithandayo kusukela ngoSepthemba 15 kuya kuOkthoba 2 - UMASHI WOKUQALA ILATIN AMERICAN- IZIMPILO EZININGI NEZININGI NGOKUMDLALO.
Okokuqala simasha ukuze sixhumane nathi, ngoba indlela yokuqala yokuhamba iyindlela yangaphakathi, sinake izimo zethu zengqondo, ukunqoba ubudlova bethu bangaphakathi nokuziphatha ngomusa, sizibuyise futhi sifisa ukuhlala ngokuhlangana futhi idrayivu yangaphakathi.
Simasha sibeka uMthetho Wegolide njengenani eliyinhloko ebudlelwaneni bethu, okungukuthi, ukuphatha abanye ngendlela esingathanda ukuphathwa ngayo.
Simasha sifunda ukuxazulula izingxabano ngendlela enhle neyakhayo, ekwandiseni ukuzivumelanisa naleli zwe esinethuba lokuliguqula.
Sasuka ngokuvakashela izwekazi, cishe futhi uqobo, ukuqinisa izwi elikhalela umhlaba owengeziwe komuntu. Asisakwazi ukubona ukuhlupheka okungaka kwabanye abantu.
Hlanganisa abantu baseLatin America, iCaribbean, abantu bomdabu, Ama-Afro-inzalo nabahlali bale ndawo enkulu, sahlanganisa futhi samasha, ukumelana nezinhlobo ezahlukene zodlame nokwakha umphakathi oqinile nongenalo udlame.
Ngamafuphi, sigqugquzela futhi simashe siye:
1- Melana futhi uguqule zonke izinhlobo zodlame ezikhona emiphakathini yethu: ngokomzimba, ubulili, ukukhuluma ngamazwi, ezengqondo, imibono, ezomnotho, ubuhlanga nezenkolo.
2- Lwela Ukungabandlululwa namathuba alinganayo njengenqubomgomo yomphakathi engabandlululi, ukuqinisekisa ukwabiwa kwengcebo ngokufanele.
3- Qinisekisa abantu Bethu Bomdabu kuyo yonke i-Latin America, behlonipha amalungelo abo negalelo labo lokhokho.
4- Lokho kusho ukulahla ukusebenzisa impi njengendlela yokuxazulula izingxabano. Nciphisa isabelomali sokutholwa kwazo zonke izinhlobo zezikhali.
5- Yithi Cha ekufakweni kwezisekelo zamasosha angaphandle, funa kuhoxiswe ezikhona, nakho konke ukugxambukela ezindaweni ezingaphandle.
6- Gqugquzela ukusayinwa nokuqinisekiswa kweSivumelwano Sokuvinjelwa Kwezikhali Zenuzi (TPAN) kuso sonke isifunda. Thuthukisa ukwenziwa kweSivumelwano seTratelolco II.
7- Yenza izenzo ezingezona ezinobudlova esivuna ukwakhiwa kweSizwe Somuntu Sonke, ngokuvumelana nomhlaba wethu.
8- Yakha izikhala lapho izizukulwane ezintsha zingaziveza khona futhi zikhule, endaweni yomphakathi engenabudlova.
9- Qwashisa ngenkinga yemvelo, ukufudumala kwembulunga yonke kanye nobungozi obukhulu obudalwe yimigodi evulekile, ukuqothulwa kwamahlathi kanye nokusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane ezitshalweni. Ukufinyelela kwamanzi okungavinjelwe, njengelungelo lomuntu elingenakwehlulwa.
10- Gqugquzela ukwehlukaniswa kwamasiko, ezepolitiki nezomnotho kuwo wonke amazwe aseLatin America; ngeLatin America yamahhala.
11- Finyelela ukuhamba kwabantu mahhala ngokususa ama-visa phakathi kwamazwe esifundeni nokwakha ipasipoti yesakhamuzi saseLatin America.
Sifisa lokho ngokuhambela isifunda nokuqinisa ubumbano ILatin America yakha kabusha umlando wethu ovamile, ekusesheni yokuhlangana kokuhlukahluka nokungabi nabudlova.
Iningi labantu alifuni udlame, kepha ukukuqeda kubonakala kungenakwenzeka. Ngalesi sizathu siyaqonda ukuthi ngaphezu kokuthwala senza izenzo zomphakathi, kufanele sisebenze ukubuyekeza izinkolelo ezizungeze leli qiniso okuthiwa alinakuguqulwa. Kumele qinisa ukholo lwethu lwangaphakathi ukuthi singashintsha, njengabantu ngabanye futhi njengomphakathi.
Isikhathi sokuxhuma, ukugqugquzela nokumasha ukuze kungabi nodlame
Ukungabi nabudlova ngoMashi kuya eLatin America.
Ulwazi oluthe xaxa ku: https://theworldmarch.org/marcha-latinoamericana/ nemashi nenqubo yako: I-Latin American 1st March - I-World March (theworldmarch.org)
Xhumana nathi futhi silandele on:
Landa le expression: UMashi Wokungabi Nodlame uhamba ngeLatin America